राष्ट्रियसभाको टिकट पाएपछि कोमल वलीले के भनिन् ? (अन्तरवार्ता) - Dainik Nepal
राष्ट्रियसभाको टिकट पाएपछि कोमल वलीले के भनिन् ? (अन्तरवार्ता)
दैनिक नेपाल २०७४ माघ ९ गते १५:०९
चर्चित गायिका कोमल वली नेकपा (एमाले)बाट राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारका लागि क्षेत्र नम्बर ५ बाट चयन भएकी छिन् । सोमबार राति बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले उनलाई उम्मेदवार चुनेको हो ।
यस अघि उनी एमालेबाट प्रतिनिधि सभाको चुनावमा लड्ने भने पछि चर्चामा आएकी थिइन् । तर एमालेले उनलाई प्रतिनिधि सभाको लागि टिकट दिएन ।
प्रस्तुत छ गायिका तथा एमाले नेतृ वलीसँग दैनिक नेपालका हेम रोकाहाको कुराकानीः
राष्ट्रियसभाको लागि टिकट पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ ?
खुसी नै लागेको छ । म त प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्ने तयारीमा नै बसेको मान्छे हुँ । अहिले यस्तो गरीमामय पदको लागि लड्दै छु । पार्टीले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको छ । यसले मनोवल उच्च पार्ने काम भएको छ । म निकै खुसी छु ।
तपाईले टिकट पाउँदा सामाजिक सञ्जाल तिर त आलोचना पो भयो नि ?
मैले टिकट पाएँ भन्ने कुरो हिजो राति मात्रै थाहा पाएकी हुँ । मैले अहिले खासै सामाजिक सञ्जाल हेर्न पाएको छैन । तर मलाई लाग्छ जान्ने बुझ्नेहरुले त त्यस्तो आलोचना गर्नुभएको छैन होला । मैले टिकट पाउँदा कोही रिसाउनु पर्ने अथवा आक्षेप लगाउनुपर्ने कारण देख्दिनँ म । मैले टिकट पाउनै पर्छ भनेर भनेको पनि थिइनँ । ५ नम्बर प्रदेशबाट महिलाहरुमा मेरो नाम सबैभन्दा माथि सिफारिस भएको थियो । म यो पदको लागि अयोग्य छु जस्तो लाग्दैन । यदि म अनुपयुक्त भएको भए मलाई टिकट नदिएको भए पनि हुन्थ्यो । म आफूलाई यसको लागि योग्न नै ठान्छु । विरोध गर्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ ।
तपाईले टिकट पाउँदै गर्दा पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नेले पाएनन्, भन्ने छ नि ?
यो त पार्टीले हेर्ने कुरा हो । म निर्णायक तहमा छैन । ७ वटै प्रदेशभरी बाटै प्रतिनिधित्व हुने कुरा हो । त्यसैले विजयी हुन सक्ने उम्मेदवारलाई उहाँहरुले छान्नु भएको हो । जसले पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरुको योगदानलाई पनि कदर गर्नुपर्छ । यदि मैले टिकट पाएको कारणले पार्टीमा लामो समय योगदान गर्ने नेता वञ्चित हुनुभएको छ भने मलाई दुःख लाग्नेछ ।
अब राष्ट्रिय सभामा तपाईले आफ्नो भुमिकालाई कसरी अगाडी बढाउनुहुन्छ ?
मैलै राष्ट्रियसभामा सकारात्मक भुमिका निभाउनेछु । यो एउटा पथप्रर्दनको अवसर हो । राष्ट्रिय सभाको माध्यमबाट राष्ट्रियता स्वाधिनता तथा एकताको प्रबर्धन गर्न लाग्नेछु । महिलाहरुको आवाज पनि बुलन्द रुपमा उठाउने छु । महिलाहरुसँग सम्बन्धीत ऐन, नियम तथा विभिन्न विधेयक पारित गर्न मैले भुमिका खेल्नेछु ।
तपाईको सांगीतिक भविष्य चाहीँ के हुन्छ ?
गायन अथवा संगीतले नै मलाई अहिलेको मेरो परिचय दिएको छ । म यहाँसम्म आइपुगेको संगीतको कारणले नै हो । म गायिका भएकै कारण पनि मैले सम्मान पाएको छु । जो पायो त्यसले यो सम्मान पाउन सक्दैन । अब समग्र संगीतको विकास र प्रबर्द्धनको लागि पनि मैले भुमिका निर्वाह गर्ने सोचेकी छु ।